မုန်တိုင်း: 1790.. Master Gmail ဆိုတာ နှင့် အသုံးပြုရန် ဖန်တီး ပုံ
1790.. Master Gmail ဆိုတာ နှင့် အသုံးပြုရန် ဖန်တီး ပုံ
Master Gmail ဆိုတာ မိမိမှာ အကောင့် တစ်ခုထက်ပိုရှိတယ်ဆိုရင် အကောင့်တွေအားလုံးဖွင့် စရာမလိုပဲ အကောင့်တစ်ခုထဲ ( Master ) က နေပြီး အကောင့် အသီးသီးကို ၀င်လာတဲ့ ၀င်စာတွေကို ဖတ်နိုင်တယ်......ဒါ့အပြင် ပြန်စာပို့တဲ့ အခါမှာလည်း ထိုအကောင့် အသီးသီး ရဲ့ နာမည်တွေ နဲ့ Master အကောင့်တစ်ခုထဲကနေ ပို့လို့ရပါတယ်......
ဥပမာ မိတ်ဆွေတို့မှာ အကောင့် A , B , C ဆိုပြီး 3ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့......အကောင့် A ကို Master လုပ်ထားရင် B နှင့် C ထဲကို ၀င်လာတဲ့ မေးလ်တွေဟာ အကောင့် A ထဲကို အားလုံး ရောက်ရှိလာ မှာဖြစ်ပါတယ်.....
အကောင့် A ကနေပဲ ဖတ်ပြီး A ကနေပဲ ပြန်စာကို B နှင့် C နာမည်နဲ့ ပို့လို့ရပါတယ်......A ကနေ B နာမည်နဲ့ ပို့ရင် သူငယ်ချင်းတွေမှာ B အကောင့် အနေနှင့် ၀င်သွား ရောက်သွားမှာပါ....အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်ရင် ပိုပြီး သဘော ပေါက်ကြ မှာပါ.....
အထက်က ပုံလို မေးလ် ပို့တဲ့ အခါ မှာ မိမိ အနေနှင့် ပို့ချင်တဲ့ မိမိ အကောင့်တွေ ထဲက တစ်ခုကို Down Arrow လေး နှိပ်ပြီး ရွေး ပို့နိုင်ပါတယ်........
Gmail Team အနေနှင့် Browser တစ်ခုထဲ မှာ အကောင့်တွေ အများကြီးဖွင့် လို့ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်......သို့သော်
အကောင့် တစ်ခုဖွင့်ဖို့တောင် မြန်မာပြည်မှာ ကွန်နရှင် မကောင်းလွန်းအားကြီးတော့် မနဲလုပ် အချိန်ပေးနေရတော့် အကောင့်တွေ အများကြီး ဖွင့် ရန် အချိန် အလွန်ကြာနိုင်ခြင်း
ဟိုဘက်ကောင့် ကိုဖွင့် ဖတ် ဒီဘက်အောင့်ကို ဖွင့်ဖတ် ဒီဘက်အကောင့်က အကြောင်းပြန်လိုက် ဟိုဘက် အကောင့်ကနေ အကြောင်းပြန်လိုက် နဲ့ အလွန်ရှုပ်ခြင်း
တို့ကြောင့် Master Gmail လေးပြုလုပ်ထားခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန် လွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်....ပြုလုပ်ရန်လည်းလွယ်ကူပါတယ်......ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်........
1....Mail Settings ထဲဝင်ပါ
2.....Account and Import ထဲဝင်ပြီး Add another email address you own ကို နှိပ်ပါ......
3.....ပြီးရင် အပေါ်က ပုံလို ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ခြား အကောင့် နာမည်နှင့် address ကိုဖြည့်ပြီး Next Step ကို နှိပ်ပါ....
4....Send Verification ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.... ပီးရင် ပေါ်လာတဲ့ window လေးမှာ Verification Code ဖြည့်ရမှာ မို့ သူကို ဘာမှ ဆက်မလုပ် ပဲ ခဏထားထားပါ......
5....အပေါ်ကပုံလို Sing in to another account ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ခုနက ဖြည့်ထားတဲ့ အကောင့်ကို ၀င်လိုက်ပါ.........
6.....အပေါ်က ပုံလို Inbox မှာ Gmail Team က မေးလ်တစ်ပောင်ဝင်နေလိမ့်မယ်....ဖွင့်လိုက်ပါ.......
7.....အပေါ်က ပုံလို Link လေးကလစ်နှိပ်လိုက်ပါက အောက်ပုံလို successful ဖြစ်သွားတာကိုတေါ့ရပါမယ်.....
8..... ပြီးရင် အပေါ်က ပုံလို code ကို ကော်ပီကူးပါ......ပြီးရင် အဆင့်4က ခဏထားထားတဲ့ Verification Code ထည့်ရမယ့်နေရာမှာ ကူးခဲ့တဲ့ code ကိုထည့်ပြီး Verify ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ....( အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ)....
9.....ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီ.....Compost Mail ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပါ.......
အခုဆိုရင်တော့် Master Gmail လုပ်လို့ပြီးပါပြီ.....ဒါပေမယ့် တစ်ခြား ကိုယ့် အကောင့်ထဲ ၀င်လာတဲ့ မေးလ်တွေကို Master Gmail ရဲ့ Inbox ထဲ ၀င်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရဦးပါမယ်....ပိုစ့်တစ်ခု အနေနှင့် ဆက်ရေးပါမယ်.....
ဒါမှ Master Gmail တစ်ခုထဲကနေဖတ်ပြီး ပြည့်စုံတဲ့ Master Gmail ဖြစ်လာမှာပါ......
Labels: Gmail-IV, Gmail-V, Gmail-VI
5 - ဦး မှတ်ချက်ပေးထားပါသည်
ဒုတိထ ပိုင်းလေး အမြန် တင်ပေးပါ
9/2/12 1:28 PM
10/2/12 11:27 AM
10/2/12 9:02 PM
1789.. ကောင်မလေး စကတ် ကို လှန်တင်မယ်.... ( Android...
1788.. ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးသူများ Timeline ၀န်ဆောင်မှုကိ...
1787.. Remove Fake Antivirus V1.84
1786.. Why does Windows7Picture Viewer does not ...
1785.. ဖိုမ သဘာဝ အသိပညာပေး ( 47 )
1784.. ကိုယ့် Gmail Account ကို ဘယ်ရက်က စပြီး လုပ်...
1783.. iPhone ကို Unlock လုပ်နည်း (မြန်မာ ebook)...
1782.. ဖိုမ သဘာဝ အသိပညာပေး ( 46 )
1781.. Registry အကြောင်း
1780.. Samsung Galaxy Series တွေမှာ root လုပ်စရာမ...